Biological nokudla yonke ebanzi bagcwalise kits abantu. Lokhu ngobuningi walabo imikhiqizo yenziwe ngezithako zemvelo. Esinye salezo ngumuthi "Tsitrosept". Imiyalelo, Isicelo, ukubuyekezwa ke izokwethulwa kuwe ku. Ungase futhi uthole kangcono umbono udokotela ngalokhu izidakamizwa. Kumele wachaza eceleni, okuyinto has a "Tsitrosept" nozakwabo.
Ukwakheka kanye nohlobo Izithako zokudla
Kusho "Tsitrosept" - ubhamubhamu imbewu akhiphe. nomuthi Ikhishwa ngesimo amathonsi kwezokuphatha temlomo na ukusetshenziswa yangaphandle. Lokho ingxenye yomuthi?
Umuthi ngobuningi kuyinto vitamin C odingekayo ngosuku lwayo indlela echazwe liqukethe okungenani 5 amagremu. Futhi, kukhona bioflavonoids. Phakathi kungenzeka izakhi ezengeziwe waphawula ubhamubhamu akhiphe glycerol zamalala ngamanzi acwebileyo. Yathela izidakamizwa izitsha eziyisikhombisa ukuthi abe ukuvuza okuthiwa. Umthamo ivolumu 10, 20, 50 noma 100 namamililitha. Okuhambisana iphakethe zomuthi "Tsitrosept" imfundo manual ngamunye. Izibuyekezo wezokwelapha bathi lula wakhe undoubted yikhono ukuthola usayizi oyifunayo isitsha.
Ahamba kahle amalungiselelo echazwe ungayithola enye?
Liyini ikhambi "Tsitrosept" analogue of kwemithi emakethe? Omunye esikhundleni echazwe izindlela angase abizwe ngokuthi lesi sidakamizwa "Tsitrostar". Wenziwe ngesisekelo akhiphe ubhamubhamu imbewu njengoba izidakamizwa yasekuqaleni. Kungenzeka futhi ukuba ungene esikhundleni ingxenye amathonsi "Tsitrolayf". Lokhu kusho, njengoba kwaba njalo endabeni langaphambilini, yakhiwa Vitamin C, angawodwa kusuka akhiphe engokwemvelo ubhamubhamu.
Have izidakamizwa "Tsitrosept" analogue isihlobo. Kusho ezifanayo senzo, kodwa isakhiwo ehluke ngokuphelele. Phakathi kwalezi bungabonakala "Anaferon", "TSikloferon", "Tamiflu", "Isoprinosine" "Amoxicillin", "Azithromycin" futhi abaningi dugie.
"Tsitrosept": analogs (umbono odokotela mayelana izidakamizwa)
Yini okwehlela ochwepheshe abafanelekayo ezihambisana imithi echazwe kanye lokunye? Imithi "Tsitrolayf" futhi "Tsitrostar" kukhona abaseduze ukubunjwa ukuba imithi yokuqala. Bonke aqukethe bioflavonoids kanye nenani elikhulu vitamin C odingekayo ngosuku unamasu abasakwazi eqolo. Odokotela bathi okuya "Tsitrostar" kuyokulahlekisela ruble angu-600. Izidakamizwa "Tsitrolayf" ngaso sonke izindleko kabili. izindlela Original njengoba kuchaziwe ngenhla, inebanga intengo ruble 700 kuya ku-3000.
Odokotela bathi kungenzeka ukwenza esikhundleni ngokuphelele zomuthi bebodwa. lokhu ukudla engeza eziphila abakhuthele ngeke nje kuphela kukuzuzise ukuba indoda. Ngakho kubalulekile ukuba acabangele Izimo, kubika ukufundiswa. Uma ukubuza odokotela mayelana okulingana eyisihlobo izindlela ezichazwe ke kwakuzoba umbono sithathwe ngokuhlanganyelwa. Izindlela ezinjalo akuvunyelwe nhlobo ukusebenzisa bebodwa. Yiqiniso, kuyasiza umfutho amasosha omzimba, ilungiselelo lokunqoba igciwane futhi sibhekane ngokuphumelelayo yezinkinga ezibangelwa amagciwane. Nokho, kuzo zonke lezi izidakamizwa kufanele libekwe kuphela ngemva ukuhlola onguchwepheshe.
Izinkomba ngokusetshenziswa izithasiselo echazwe
Lokho yazisa mayelana imithi "Tsitrosept" yokusetshenziswa? Uphenyo odokotela bathi izidakamizwa is kabanzi. Ingasetshenziselwa ngoba ngokuvinjelwa noma ngokwelashwa. Ngokuvamile ukwakheka yaphathwa ukwelashwa. I izinkomba main ukusetshenziswa kukhona amaconsi ngeke imikhuhlane njalo futhi izifo ezibangelwa amagciwane. Ukwakheka kusiza lithuthukisa isimiso somzimba sokuzivikela futhi bahlele umsebenzi ukumelana lomzimba.
Futhi echazwe ejenti engabelwe ukwelapha izifo ezifana zamagciwane ezihlukahlukene umkhuhlane, izifo zemigudu yokuphefumula nesifo, SARS nokunye. Kulokhu, lo ngaphambili siqale ukusebenzisa imithi, ngokushesha kwaba nomphumela omuhle. Amaconsi aqokwa kanye nezinkinga ezibangelwa amagciwane, kanye nokuvinjelwa yayo. Ukwakheka isetshenziselwa ukwelapha isikhumba ukuqeda ukuvuvukala.
Kuchazwe imithi njengoba nozakwabo lakhe eliphelele, ungalokothi esimisiwe lapho kungenzeka ukuthuthukiswa komzimba nezinto izingxenye ezisawolintshi. Futhi, ukwakheka akukashicilelwa esimweni hypersensitivity ekhona ukuze izingxenye ezengeziwe. Yingakho odokotela beluleka ukufunda ngokucophelela indlela yokwakheka izidakamizwa.
Amaconsi benganikezwa kwabesifazane abakhulelwe ngenxa yokuntuleka idatha emitholampilo ku ukusetshenziswa okunjalo. Futhi ukusetshenziswa kwezidakamizwa "Tsitrosept" futhi analogue yayo esikhathini ibele ingadala ukusabela ezingalindelekile kusuka umzimba ingane. Musa ukubheka ukusebenza izidakamizwa ngenjongo yokuthola izifo ezibangelwa amagciwane. Nakuba nomuthi elwa namagciwane, kulesi simo sidinga ukwelashwa okwengeziwe ngesimo antimicrobial efanelekayo.
Indlela yokusebenzisa amathonsi
Uma usebenzisa imithi ngomlomo kumele ngempela siyochithwa. Ungasebenzisa noma yiluphi uketshezi. Nokho, izinga lokushisa akufanele kube okusezingeni eliphezulu. iziguli Adult e izifo kanye nezifo ezibangelwa amagciwane ebekiwe inkathi kusukela 25 kuya 50 amathonsi ngosuku. Wena ingahlukaniswa umthamo ku izikhathi eziningana uma uthanda. Inkambo yokwelashwa kufanele kube hhayi ngaphansi kuka ngenyanga eyodwa. Uma kudingeka, ku iseluleko udokotela sikhathi lungaboniswa.
Njengoba isilinganiso izifo Ukwakheka ebekiwe 5-10 sehla kabili ngosuku. Izingane imithi ezinqunyiwe kuye isisindo emzimbeni. Kulokhu, iconsi kumele kwenzeke kilogram per. okufakiwe Ubude begazi ihlukaniswe izicelo ezintathu.
Lapho usebenzisa i-esikhumbeni oyi-ukwelashwa endaweni kufanele ahlanze futhi ugeze izandla zakhe. Ngaphambi ukusetshenziswa alulaze ekwakhiweni endaweni Ingxenye eyodwa kwenye. Ngemva kwale nqubo ebusweni lilimele.
Ukwakheka bunikezwe le zabesifazane, Cosmetology, amazinyo, nezesikhumba kanye kwamanye amagatsha wokuphila emkhakheni wamuva wezokwelapha. imithi Kuchazwe kuthambisa isikhumba, ukukhiqiza ukucelela noma uhlambulule douching, abesifazane kuyabekwa. Ngakho esimweni ngasinye wesifunda ehlukile futhi umthamo ekhethiwe.
"Tsitrosept":-Google + futhi odokotela
Abathengi bathi lokhu umuthi ngempela eqolo. Odokotela basikisela ukuthi kuwufanele imali. Ngemva kwengoma uyakwazi okwandisa amasosha omzimba azolwa negciwane. Uma usebenzisa izidakamizwa kusaqalwa lesi sifo ukwakheka kusiza ukugwema ukuthuthukiswa yezinkinga ezibangelwa amagciwane.
Abathengi abaningi baphathwa kwezidakamizwa prophylaxis izingane zabo ababa khona izikhungo zemfundo. Futhi lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba iqembu enkulu avame igciwane igciwane. Izidakamizwa "Tsitrosept" oyenza imisebenzi okuvikela umzimba futhi inikeza flavonoid yayo. Izingane ngenjabulo amathonsi ohlukanisile, ngoba izidakamizwa has iphunga elimnandi kanye ukunambitheka.
Oyifundile mayelana ikhambi lemvelo ngokuthi "Tsitrosept". Yokusetshenziswa futhi protipokazaniya eyethulwe ukunakwa kwakho kulesi sihloko. Naphezu kwazo zonke lezo zici ezinhle, umuthi kungabangela komzimba. Yingakho nokusebenzisa kwayo ukuqala ngemithamo omncane. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uxhumane nodokotela wakho.
"Tobrex" conjunctivitis ezisanda kubelethwa
Credit ingozi: nezindlela zokuhlola nezindlela ukunciphisa
LG H324 Leon: izibuyekezo smartphone